ဗိုင်းရပ်စ် သတိပေးချက် (Breaking News) ~ Myanmar Express
From : လင်းထက်ဇော်အရေးကြီးတယ် ဆက်ပြီး share ပေးပါ... aungsansukyi@blumail.org ဟု add လာပါက လုံးဝလက်မခံပါနဲ့ ။ ၂၄ နာရီအတွင်း မိမိတို့အကောင့်များ ပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မည် ။ အမေစုဖြေပေးပါ အပိုင်း ၂ ဆိုပြီး zip ဖိုင်နဲ့ ပို့ လာတာဟာ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ VIRUS ပါ ။ ကွန်ပျူတာ ကို လုံးဝ ပျက်သွားစေပါတယ်.. လုံးဝ ဖွင့်မကြည့်ပါ နဲ့ ။ မှတ်ချက်။ ။ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ပြီး သတ်ဖို့အဖြေရှာ မရ နိုင်သေး ခင် ကြိုတင်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။Myanmar Express
Hello....brainless woman, supported by un-educated and un-informed people...your road to downfall has already begun since you were released. Every sensible person knows you are going to stumble if you are released....
17 June 2012 21:37
I really believe your political ways are beingwrong.
17 June 2012 22:58
ပြန် ပါ တော့ ဓေါ် ဆု ယယ်